လူမှုဖွံဖြိုးရေး | Mg Ogga's Notes
Tag Archives: လူမှုဖွံဖြိုးရေး
ကိုဝိမုတ္တိသုခက ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းမလား ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ဦးနှောက် မုန်တိုင်းဆင် မိတယ်။ ဘာတွေ ညာတွေ သိလိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ အစ်ကိုဝိမုတ္တိသုခကို ကွန်မန့်ပေးသည့် အနေနဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုလောက် ရေးလိုက်ပါတယ်။ အမှားပါရင် ပြင်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေ ဟာ အစ အလယ် အဆုံး သုံးပါးကောင်းခြင်းနဲ့ ပြည်စုံတယ် နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓတရားတော် တွေကို လောကုတ် နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ယုံတာမက လက်ရှိဘ၀ လောကီ အရေးတွေ မှာပါ အသုံးဝင်တယ် ဆိုတာ မိချောင်းမင်းကို ရေခင်းမပြနေတော့ပါဘူး။ဗုဒ္ဓတရားတော် တွေကို လောကီလူဘောင့် လူမှုရေး၊နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး စတဲ့ နေရာတွေမှာ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေ ကို ကောက်နှုတ် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ သာသနာဝန်ဆောင် သံဃာတော်တွေက သိပြီးသား ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကို ဒကာ…
June 5, 2010 in ဘာသာရေးရာ, လူမှုဖွံဖြိုးရေး.
မနေ့ကပဲ ဓမ္မမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပေးတဲ့ စာအုပ်ငယ်လေးတစ်အုပ်ရလိုက်တယ်။ အရှင် ဓမ္မဘေရီ(တောင်စွန်း) ရေးတဲ့ စာအုပ်လေးပါ ဘုန်းဘုန်းအရှင်ဆန္ဒာဓိကနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ရဝေနွယ်(အင်းမ)တို့ ဗောဓိတစ်ထောင်ဘုရား ဓာတ်လှေကားပေါ်ကနေပြုတ်ကျတဲ့ အကြောင်းကို အတွေးစချဲ့ပြီးရေး ထားတာ မာန်နတ်မင်းကိုအံတုသူများတဲ့ အတော်တော်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဒီအထဲက အကြောင်းအရာ တော်တော်များများကို သဘောကျ မိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပရဟိတလုပ်သားတွေဟာ အများကောင်းဖို့ သက်သက် အလုပ်လုပ်နေကြတာပါ။ အဲဒီ အချိန်မှာ အခက်ခဲတွေ တွေ့ကြုံရတယ်။ တခြားအခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ပေမဲ့ အပြစ်ပြောခံရတာ ကိုတော့ ပုထုစဉ်ပီပီ မခံနိုင်ဘူးဗျ။ အရင်က မန္တလေးမှာနေတော့ ဘာမှအလုပ်မရှိအကိုင်မရှိ ၁၀၉/၁၁၀ စားလိုက်သောက်လိုက်နဲ့နေတုန်းက ဘယ်သူမျလည်း အပြစ်မဆို ဘယ်သူမှလည်း အပြစ်မပြောကြဘူး။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ နောက်ပိုင်း ဒေသဖွံဖြိုးရေးအလုပ်တွေလုပ်မယ် အများအကျိုးဆောင်မယ် ဆိုပြီး စိတ်ရူးပေါက်ပြီး ရန်ကုန်ဆင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာစတွေတာပေါ့…
December 17, 2009 in ဘာသာရေးရာ, လူမှုဖွံဖြိုးရေး, Uncategorized.
PRA ဘာလဲ ကျွန်တော်သင်တန်းအကြောင်း စရေးတော့မယ်ဗျာ။ နေ့စဉ်သင်သွားတဲ့ဟာတွေ လျှောက်ပြောနေရင် ပျင်းစရာကြီးဖြစ်မှာစိုးလို့ အဓိက အချက်တွေနဲ့ အနစ်သာရကိုပဲပြောသွားတော့မယ်နော်။ PRA ဆိုတာ အတိုကောက်ပါ ဖွံဖြိုးရေးလောကထဲက လူတွေကတော့ PRA ဆိုရင်တန်းသိကြသဗျ။ အရှည်ကတော့ Participatory Rural Appraisal မြန်မာလိုပြန်ရင် ကျေးလက်ဒေသပါဝင်ရောယှက်ဆောင်ရွက် မှုဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်မှုလို့ တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ ဆရာတစ်ယောက်ကတော့ သိမြင်ခံစား လက်တွေ့လှုပ်ရှား နည်းစဉ်လိုပြောဖူးပါတယ်။ PRA နည်းလမ်းကို ၁၉၈၈ခုနစ် ကင်ညာနိုင်ငံမှာ National Environment Resources and Clark University,USA က စတင်အသုံးပြုတယ်လို သိရပါတယ်။
December 17, 2009 in လူမှုဖွံဖြိုးရေး.
အခြေအမြစ်မရှိတဲ့သူတွေကို ကူညီဖို့ကြိုးစားနေတာဟာ ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ် အသိဥာဏ်ကင်းမဲ့ပြီး ညစ်ပတ် စုပ်ပြတ် နေကြသူတွေဟာ မြောက်များလှတဲ့ကလေးတွေ မွေးထုတ်နေကြတယ်။ သူတို့တွေ အလုပ်မလုပ်ပဲ ပျင်းရိကြတယ်။ စည်းကမ်းလည်းမရှိ ဘာအတွေးခေါ်မှလည်းမရှိ။ သူတို့တွေဟာ ရတဲ့ အခွင့်အရေးကို အလွဲသုံးစားပြုကြတယ်။ သူတို့လက်ထဲ ငွေနည်းနည်းရှိတာနဲ့ အရက်သောက် ယစ်မှုးပြီး အကျိုးမဲ့စွာ သုံးဖြုန်းပစ်ကြတယ်။ သူတို့တွေကူညီတာ ပျင်းရိမှုကိုအားပေးတယ် နောက်ထပ်ကလေး တွေထပ် မွေးစေဖို့အားပေးတယ်၊ ဆင်းရဲတာဟာ ကံတရား၊ သူတို့ နောက်ဘ၀က ကောင်းမှုကုသိုလ်တာမှမလုပ်ခဲ့တာ၊ ဒါကိုပြင်လို့မရဘူး၊ ဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းပဲလို့ ထင်ကြသူတွေ ယုံကြည်သူတွေ ဆက်ဖတ်စရာမလိုပါ။ အရာရာဟာ အတိတ်ကံကြောင့်ဆိုရင် ကုဋေရှစ်ဆယ်သူဌေးသားဟာ သောတပန်တည်ဖို့ အထိ ပါရမီကံပါပြီးသား ဘာကြောင့် ဆင်းရဲသွားသလဲ ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်ပါ။ ကံဆိုတာ အလုပ်၊စိတ်စေတနာ ဆိုတာ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောထားတာပဲ။ အရာရာကံကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်မှာလည်း…
December 17, 2009 in လူမှုဖွံဖြိုးရေး, ဆောင်းပါး.
September 1, 2009 in စားသုံးသူဝါဒအကြောင်း, ဘာသာရေးရာ, လူမှုဖွံဖြိုးရေး.